Shaqa ka Friisigii oo Dib loo Dhigay 24 Saacadood - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqa ka Friisigii oo Dib loo Dhigay 24 Saacadood
La daabacay måndag 23 april 2012 kl 13.36
Shaqa ka fariisigii lagu dhawaaqay ee dareewallada basaska taga garoommada dayuuradaha ee hir-geli lahaa maanta labada duhurnimo ayaa dib loo dhigay muddo 24 saacadood ah, middaasina lagu macneeyey iyada oo wada-hadalladiina halkoodii ka sii socdaan, sidaa waxaa lagu sheegay bogga iternetka ee ururka shaqaalaha ee degmooyinka.
Shaqa ka fariisigan ayaa looga gol lahaa iyada oo lagu taageerayey shaqaalaha kalkaaliyeyaasha ee dadyowga aan isku filleyn.
Laga bilaabo jimcadii ina dhaaftay ayuu ururkushaqaalaha degmooyinku ku dhawaaqay inuu shirkadaha daryeelka qaarkood ku soo rogay in aaney howl-gelin karin shaqaale hor leh ee ku meel-gaar. Waana shaqa xayirid quseeysa shaqaalaha gacan-yareyaasha ee saddex shirkadood ee ku howl-gala daryeelka. Shirkadahaasina oo ey ka howl-galaan 15 300 oo ruux.
Wadahadalka u socday labada dhinac ayaa istaaga maalintii jimcada kadib ururka shaqaalaha degmooyinka oo ku gacan seeyray waanwaantii ey saraakiisha dhexdexaadineysey u soo jeediyeen. Halka xubnaha ururka shaqa-bixiyeyaashu ogolaadeen waanwaantaa oo dhammayd 2,6% in mushaarooyinka kor loo qaado.
Jawaabta ururka shaqaalaha degmooyinku bixiyayna dabadeed waxaa hir-gashay joojintii in shaqaale ku meel gaar ah la howl-gelin karo, haddii ruux shaqaalaha gacan-yareyaasha ka mid ahi xanuunsado.
Wadahaddallada Ururka Shaqaalaha Degmooyinka iyo Dhiggiisa